Unicode - Blogs - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
All Blog Posts Tagged 'unicode' (14)
Myanmar Wiktionary reaches 100,000 words
ဒီနေ့ မြန်မာဝစ်ရှင်နရီ ဝေါဟာရ တစ်သိန်း ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ် ပုံမှန်ဝင်ရေးနေတာ Trh နဲ့ ကျွန်တော် နှစ်ယောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ Myanmar NLP က ပေးတဲ့ မြန်မာစာ ဒေတာဘေ့စ် ကို… Continue
Added by Lionslayer on April 23, 2011 at 3:00pm —
How to install & use Masterpiece Uni Sans on Ubuntu
It is compliant with *** (Open Type?) specification.
Being linux-native (using pango to render), it is slightly faster to render than other fonts.
All other unicode fonts except padauk have some (minor) rendering problems on linux. MasterPiece Uni Sans can render properly and look better than padauk.…
Added by trh on February 7, 2011 at 12:30am —
Language technology issues တွေ fonts တွေ encoding တွေ unicode တွေ လေ့လာချင်သူတွေ အတွက် အတော် ကောင်းတဲ့ စာအုပ်ပါ။ အထူကြီးပါ။ စာမျက်နှာ ၁၀၀၀ ကျော်ပါတဲ့ ebook ပါ။
PDF | 41 Mb | HF
This reference isafascinating and complete guide to using fonts and typography on the Web and acrossavariety of operating systems and application software. Fonts & Encodings shows you how to take full advantage of the… Continue
Added by Win Myanmar Systems on January 19, 2011 at 2:20pm —
No Comments ယူနီကုဒ်ဆိုသည်မှာ
ပထမဦးဆုံးပြောချင်တာကတော့ ဒီ Post မှာ Zawgyi တို့ Myanmar3 တို့ဆိုတဲ့ Font တွေအကြောင်းပြောမှာ (လုံးဝ) မဟုတ်ပါဘူး။ Unicode အကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ အများစုက Unicode ဆိုတာကို စိတ်မဝင်စားကြပါဘူး။ ဘာလို့စိတ်မဝင်စားလဲဆိုတော့ - ဘာမှန်းကို မသိလို့ပါ။ တစ်ချို့လည်း "သိသလိုလိုတော့ရှိသား" လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ Unicode ဆိုတာက စာလုံးတွေပေါ်ဖို့သုံးရတဲ့ Font လို့ထင်နေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း "ဒီ Unicode ဆိုတဲ့ Font ကိုများကွာ၊ ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်နေကြတာ။ ဒီလူတွေ တစ်ခြား လုပ်စရာ… Continue
Added by Ei Maung on January 15, 2011 at 2:38pm —
Setting-up Unicode Keyboard in Ubuntu
Linux မှာ Unicode Keyboard တစ်ခု Install လုပ်ရတာ မလွယ်ပါဘူး။ Windows Installer တွေလို အသင့်ဖန်တီး ပေးထားတဲ့ Installer မရှိပါဘူး။ ဒါ ပေမယ့် အဲ့ဒီလိုမလွယ်တာကိုက Linux ရဲ့ ကောင်းကွက်တစ်ခုလို ဖြစ် နေပြန်ပါတယ်။ Linux ဟာ Do-It-Yourself OS အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
အစစအရာရာ လွယ်ကူ နေ တော့ လွယ်လွယ်နဲ့ပဲ ပြီး နေတာ ပေါ့။ ခက်ခဲ နေတာကို အဆင် ပေပြေ အောင် ကိုယ်တိုင် ဖြရှင်းနိုင် တော့ အလုပ်လုပ်ပုံကို အ သေးစိတ်ပိုသိသွားတာ ပေါ့။ ဒါ ကြာင့်လဲ Linux ကို စမ်းသပ်လိုစိတ်ရှိတဲ့ သူ တွေကလွဲရင်… Continue
Added by Ei Maung on January 13, 2011 at 10:30am —
ယူ​နီ​ကုဒ်​ကြောင့် မြန်မာ​စာ စာလုံးပေါင်း​သတ်ပုံ စစ်​လို့​ရ​ပြီ
မြန်မာ​အိုင်​တီ​ပ​ရို​အပါ​အ၀င် အဓိက Web Site တော်တော်​များ​များ ယူ​နီ​ကုဒ်​စနစ်​ကို ပြောင်းလဲ​ခဲ့​ကြ​ပြီ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ဘာ​ကြောင့် ပြောင်း​ရ​တာ​လဲ? မြန်မာ​စာ​ကို နိုင်ငံ​တစ်​ကာ​အဆင့်​အဖြစ် မြှင့်​တင်​နိုင်​ဖို့​ပါ။ အခု​ချိန်​မှာ ကွန်​ပြူ​တာ​သုံး​မြန်မာ​စာ​ရဲ့​အဆင့်​အတန်း​ဟာ နိုင်ငံ​တစ်​ကာ​ကို​မ​ဆို​ထား​နဲ့ အိမ်နီးချင်း​နိုင်ငံ​တွေ​နဲ့​တောင်​မှ နှိုင်းယှဉ်​လို့​မ​ရအောင် နိမ့်​ကျနေ​ပါ​သေး​တယ်။
Added by Ei Maung on January 8, 2011 at 1:30pm —
Unicode: Auto Convert Script for Wordpress Comment
မြန်မာအိုင်တီပရိုကို ယူနီကုဒ်စနစ်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ ပထမဦးဆုံးစဉ်းစားမိတာက Keyboard ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ Member တွေအနေနဲ့ Unicode Keyboard တစ်ခုကို ပြောင်းသုံးစရာမလိုပဲ လက်ရှိသုံးလက်စ ဇော်ဂျီ Keyboard နဲ့ပဲ ဆက်သုံးလို့ရအောင် လုပ်ပေးဖို့ ကြိုးစားဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရာဗီရဲ့ Font Detect Script နဲ့ ကိုငွေထွန်းရဲ့…
Added by Ei Maung on January 5, 2011 at 2:00am —
Unicode User Guide for Myanmar IT Pro
The founder of Myanmar IT Pro proposed to change Myanmar IT Pro's default font to Unicode in Dec 30, 2010. He said -
"Unicode is not just how Myanmar language should be stored or… Continue
Added by Ei Maung on January 4, 2011 at 3:00pm —
Profile Page (a.k.a My Page) Update Guide
If you can't see following Myanmar text correctly, please read the Unicode User Guide first.
မြန်မာအိုင်တီပရိုမှာ Member တွေရဲ့ Profile Page (My Page) ကို မိမိတို့နှစ်သက်ရာ Style နဲ့ရွေးချယ်ဖော်ပြနိုင်ဖို့အတွက် Themes တွေ အဆင်သင့်ပေးထားပါတယ်။ အများစုကလည်း Themes တွေကို ရွေးချယ်အသုံးပြုထားကြပါတယ်။မြန်မာအိုင်တီပရိုကို ယူနစ်ကုဒ်စနစ်သို့ပြောင်းလဲထားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို… Continue
Added by Ei Maung on January 3, 2011 at 4:00pm —
မင်္ဂလာပါမြန်မာအိုင်တီပရိုမင်ဘာများခင်ဗျာ။ မြန်မာအိုင်တီပရိုရဲ့ Default Font ကို Unicode နဲ့ စတင်အသုံးပြုနေပြီဖြစ်ပါသည်။ ကွန်ပြူတာသုံး မြန်မာစာ၏ အဆင့်အတန်းသည် အခြား Language များနှင့် ယှဉ်လျှင် များစွာနိမ့်ကျနေပါသေးသည်။ အိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံများဖြစ်သည့် ထိုင်း၊… Continue
Added by Ei Maung on January 3, 2011 at 11:00am —
Added by Win Myanmar Systems on October 12, 2010 at 5:00pm —
How to install Unicode(Myanmar 3,Parabaik)
How to Install Myanmar 3Step:1Go to Myanmar NLP webpage
Step:2Extract the package.Click on mm3 font
Step:3Click on install… Continue
Added by Wayne on February 19, 2010 at 12:00pm —
2009 News: Unfortunately BBC Burmese is now available in Burmese
Myanmar Unicode Migration has never been easier. BBC Burmese just added another woe. Now it is available in Unicode 4.0.
BBC Burmese isapotential web site that can help Myanmar Unicode Migration
Media web sites have very high traffics and potential to deliver Unicode fonts to the client computers. Not more than such five top web sites adopting Unicode 5.1… Continue
Added by Okisan on January 9, 2009 at 2:30pm —
How to list in itpro home page?
ျမန္မာ IT pro မွာ တင္တဲ့ forum ေတြ post ေတြ blogေတြကို main Page မွာ ဘယ္စနစ္နဲ့ ning က စီေပးသလဲ သိခ်င္ပါတယ္။
့hit ေပၚတည္လား။ comment ေတြ ေဆြးေႏြလာတဲ့ေပၚတည္လား။ အခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ ဆိုတဲ့ ေပၚတည္လား။ လိုသလို တစ္ဦးဦးကစီစဥ္လား သူက မူလ စနစ္တခုနဲ့ သြားေနလား သိခ်င္ပါတယ္။ သတိထားမိသူမ်ား ေဆြးေႏြးေပးၾကပါ
ေနာက္ျပီး ဘယ္လိုေရးသားမွုမ်ိဳးကို ဖယ္ထုတ္သန့္စင္ေနလဲဆိုတဲ့မူကိုသိခ်င္ပါတယ္။ Added by ye myat thu on November 1, 2008 at 9:21pm —